20 tabaha loogu talagalay xiirashada qumman | Ragga Stylish
20 tabaha loogu talagalay xiiro qumman
El xiirid qumman, ereygan ku soo noqnoqonaya madaxeena oo aan jeclaan lahayn in had iyo jeer la oofiyo. Marar badan socodka ayaan ku baraarugsanayn dhibaatada aan u leenahay maqaarkayaga oo aan dhaqso u xiirno oo aan u orono
Tilmaamayaasha aan soo jeedinayo maanta, waxaad ka dhigi doontaa hawshan xiirashada inay noqoto daaweyn qurux badan.
Maqaarkaagu waqti ha qaato. Isla marka aan kacno, maqaarku wuu bararsan yahay waxaanan leenahay dareenkaas waji hurdo leh. Haddii aad xiirto waxa ugu horreeya subaxnimada, u oggolow ugu yaraan 10 daqiiqo inay dhaafto ka hor intaadan bilaabin xiirashada si aad naftaada u siiso meel fiican oo aad ku shaqeyn karto.
Diyaarso maqaarka. Si aad u bilawdid xiirista, waxaa aad muhiim u ah inaad marka hore maqaarkaaga ku nadiifiso biyo qabow si aad u dhaqaajiso. Haddii aan ku maydhanno biyo kulul, maqaarku, oo ay u dheer tahay inuu si xad dhaaf ah u qallalan yahay, wuxuu sababi karaa cuncun ka dib xiirashada, iyo xitaa inuu jebiyo xididdada dhiigga ee yaryar.
Ha xiirin maalin kasta. Haddii aad tahay qof maalin kasta xiirto, u daa maqaarkaaga inuu nasto adigoon xiirin ugu yaraan hal mar usbuucii. Ka faa'iideyso fursad aad naftaada ka dhigto mid wanaagsan quruxda quruxda si aad u siiso qadar dheeri ah oo biyo ah oo aad ugu nasato wejigaaga.
Maalgeli alaabta wanaagsan. Haddii aad ka mid tahay kuwa burushka ku xiira, maalgashi ku samee. Waa lagama maarmaan inaad doorato mid tayo leh si aad u abuurto lakab taajir ah oo kareemo leh ka hor intaadan xiiraynin waxay kaa caawineysaa inaad timaha kor u qaaddo si aad u hagaajiso xiirashada oo aad u xoqdo maqaarka adoo ka takhalusaya unugyada dhintay.
Ha ku xiirin xawaare. Badanaa ragga dhibku ka soo gaadho nabarro ama gubasho inta ay wax xiirayaan, waa kuwa ay xiirtaan kun saacaddii oo isticmaala dhaqdhaqaaqyo dhaadheer iyo baaxad leh. Waxaa fiican inaad waxyar usocoto oo aad daryeesho maqaarka intaad xiiraysid.
Ku dhaji jelka xiirista ee wareegyada. Si ay sifiican ugu faafto inta hartay oo dhan, mari mariinkaaga xiirista wareegyo yar yar adoo kaashanaya farahaaga, u ogolow sheyga inuu nasto oo si fiican u dhexgalo wajigeena.
Iskadaaji, ha riixin daab. Waa quraafaad haddii aad daabku sii riixdid, xiiriddu way dhowdahay. Waxa kaliya ee aad sameyn doontid waa inaad maqaarka ka careysiisaa oo aad dhaawacdaa. Si tartiib tartiib ah ugu dheji daabkeeda oo ha u ogolaato inta hartay.
Saliid xiiran, si aad u daryeesho wajiga. Haddii aad rabto inaad xiiristaadu ahaato mid jilicsan, saliid xiirashada hoos dhig xumbada xiirashada, kareemka ama jelka aad caadi ahaan u isticmaasho.
Dibnaha kore ha noqdo waxa ugu dambeeya ee aad xiirto. Timaha aan ku leenahay bushimaha kore way ka adag yihiin qeybaha kale ee wajigeena, waxaana fiican in si fiican loo qoyo kareemka xiiraya si timuhu u jilcaan, sidaa darteed, waxaa fiican in uu noqdo aaggii ugu dambeeyay ee aan xiirano.
Ku xiir qubays kulul. Haddii aad rabto inaad xiirto raaxo badan, waxaad ku sameyn kartaa qubayska. Uumiga ka imanaya qubeyska kulul wuxuu gacan ka geysan doonaa furitaanka timaha godadka timaha iyo jilciya si aan aad ugu xiirno
Weligaa ha ka xiirin hadhuudhka. Haddii aad sameyso, waxa kaliya ee aad ku soo saari karto wajigaaga waa cuncun iyo waxyeelo soo gaarta foosha.
Adeegso badeecooyin xasaasi ah haddii maqaarkaagu xasaasi yahay. Ha noqon mid qallafsan, oo haddii aad ogaato in mar kasta oo aad xiirto aad leedahay cuncun maqaar, waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah maqaarkaaga oo xasaasi ah. Xaaladdaas, ha ka waaban inaad u isticmaasho alaab gaar ah nooca maqaarkaaga.
Haddii aadan haysan waqti subaxa hore, xiir habeenkii. Marar badan ma haysanno waqti aan si deggan subaxdii ugu xiirno, markaa iska xiiro habeenka si aad u xiirto ka dib, waxaad maqaarkaaga u siisaa ilaa 8-10 saacadood oo nasasho buuxda ah
Aloe vera, saaxiibkaaga ugu fiican. Dhammaan kuwa ka cabanaya cuncun, oo leh maqaarka xasaasiga ah, waxa ugu fiican ka dib xiirashada waa in wajiga la mariyo wax yar oo aloe vera ah. Waxay kaa caawin doontaa dejinta iyo qoyaan maqaarkaaga waxayna yareyn doontaa xanaaqa.
Hubi xaaladda mandiishaada mandiilka. Marar badan kamaanaan war qabno marka garbaha mindida la gashado. U beddel sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dareento, maxaa yeelay haddii kale, waxa kaliya ee aad maqaarkaaga u sababi doontaa waa casaan iyo cuncun. Haddii aad xiirto maalin kasta waxaa lagugula talinayaa inaad beddesho daabka usbuuciiba hal jeer, gaar ahaan haddii gadhkaagu adag yahay.
Daboolista goos gooska. Haddii aad isku gooysay mandiqa, isku day inaad qarinaysid meelihiisa oo aad ku waraabiso alaabooyin gaar ah oo xiirashada.
Tirtir dabada kadib. Intooda badani waxay ku badan yihiin maaddooyinka khamriga, waxay sameeyanaana waa qalajinta maqaarka waxayna kordhisaa halista cuncunka waxayna saameyn ku yeelataa difaaca dabiiciga ah ee maqaarka, iyadoo la dedejinayo gabowga xilli hore ee maqaarka. Taabadalkeed, isticmaal beeyo dabaysha ka dambeeya ama qoyaan si aad u dejiso una soo celiso caqabadda fuuq-baxa.
Alaabada qabow-xiirashada kadib. Codsashada beeyo ka hortag ah ayaa si weyn lagugula talinayaa markaad xiirto. Haddii kale, sidoo kale wey fiicantahay in maqaarka lagu mariyo baraf baraf ah.
Had iyo jeer waraabi maqaarkaaga ka dib xiirista. Xitaa haddii maqaarkaagu u muuqdo mid jilicsan marka aad xiirto, waxaad u baahan tahay inaad biyo siiso, gaar ahaan haddii aad leedahay maqaar qalalan. Xusuusnow inaad qoyso maqaarka laba jeer maalintii, subaxa iyo habeenki, kadib nadaamka nadiifinta wajiga.
Baro xiirista. Ma jiraan wax ka liita hankeenna marka loo eego inay noo sheegaan inaynaan garanayn sida loo xiirto, laakiin marar badan waxaa lagama maarmaan ah in la barto sida wanaagsan loo sameeyo si aanad isu goyn oo aad u xanaaqdid maqaarkaaga.
Xaqiiqdii 20-tan khiyaano wixii hada ka dambeeya waxaad wax yar oo caan ah iyo waqti siin doontaa xiirashada si ay u fiicnaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » 20 tabaha loogu talagalay xiiro qumman
Yudi Matos dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo alaabada xiirashada
Ku jawaab yeudi matos
Bartamaha bisha Movember, baro sida loo hagaajiyo loona daryeelo shaarubaha
Jaakada maqaarka. A classic ka mid ah classics